China Pe mukaka bhegi inosvina muchina vagadziri uye vanotengesa | Kupfuma Mashini
Pe mukaka bhegi inosvina muchina
Uyu mutsva mhando wepurasitiki muchina, wakakosha wepurasitiki kudzokorodza uye yekuwacha tambo, inogona kutsiva iyo yemvura muchina, yakaoma muchina, mushure mefirimu kubva kunze kwakanyanya kukweshesana kugeza. Paunenge uchigadzira granules, zvakare haina kuda compactor.
Uyu mutsva mhando wepurasitiki muchina, wakakosha wepurasitiki kudzokorodza uye yekuwacha tambo, inogona kutsiva iyo yemvura muchina, yakaoma muchina, mushure mefirimu kubva kunze kwakanyanya kukweshesana kugeza. Paunenge uchigadzira granules, zvakare haina kuda compactor. Kuchaponesa kwakawanda muchina mutengo uye simba.uye nyore kudzora.
General dhizaini mazano senge pazasi:
1.kusvina muchina wedhiramu hapana zvakafanira kurapwa ne38Crmoal, nekuti fricton chikamu chiri pamusoro.
Asi unoda kurapwa kunopisa. (Heating part by 38Crmoal)
2.squeezing muchina dhiramu dhizaini, pamusoro pechiso, iyo dhiramu ichave ichaboora mamwe madiki maburi.mukati gomba rinenge 3mm, kunze pamusoro pe6mm.
Saka dhizaini iyi inogona kuona kuti haibatwe nezvinhu kana iine kumanikidza mukati.
3.mukati mekusvina muchina dhiramu ine mashanu pcs Keyway, (mufananidzo 300 mhando, uine 6 pcs Keyway),
iyi Keyway basa ndeyekuti ita kuti rawmaterial isundire kumberi ne screw.
4.chinosvina muchina Screw zvinhu zvinofanirwa kunge zviri 38Crmoal, rigidy yakakwira, Kwakanaka abrasion kuramba.
5.squeezing muchina sikuruwa dhizaini naVIRI-IN-ONE, vachishandisa mutengo wakaderera.
6.the makomba eforoma yekusvina muchina anogona kuchinjika
kana ruzivo runonakidza, bata kune info@zjgrcmc.com
Muchina uyu unotora chirevo chekusvina kupera mvura, inova yekuchenesa epurasitiki firimu (epurasitiki firimu, epurasitiki yekurima firimu mulch, PP rakarukwa bhegi, nyoka ganda bhegi, nzvimbo bhegi, tani bhegi, mutete epurasitiki jira marara epurasitiki) nekukurumidza Chishandiso chekusvina kunze mvura iri mupurasitiki. Yakashongedzerwa ne rotary screw kifaa, chaiyo yekudzora, yakakwana otomatiki zvigadzirwa zvekusvina uye kudiridza epurasitiki firimu, epurasitiki yekurima firimu mulch, PP rakarukwa bhegi, nyoka ganda bhegi, nzvimbo bhegi, tani bhegi, yakatetepa epurasitiki jira marara epurasitiki, nezvimwe. Muchina uyu unotora musimboti wekusvina kupera mvura mumuviri uye unoshongedzerwa nemuchina wekutenderera sikuruwa kusvina uye kushayisa mvura firimu repurasitiki. Iko kusvina uye kupera simba kwemvura nekukurumidza kuri kushanda uye mhedzisiro yacho yakanaka. Muchina uyu uri nyore kushanda, kusvina uye kupera simba kwemvura kunogona kusvika zvinopfuura 95%, uye goho rinogona kuverengerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
1. Iyo yakasarudzika yekusvina kupera mvura mushe inogadzirisa dambudziko rakaoma retsika firimu-senge epurasitiki kupera mvura.
2. Zvakanaka kusvina mhedzisiro: zvinopfuura 95% zvakavimbiswa;
3. Tekinoroji yeTaiwan, yakagadzirwa muChina, inodhura zvakanyanya;
4. Mechanical extrusion kupera mvura, kana ichienzaniswa neyekutanga inopisa mweya kuomesa, inochengetedza zvakanyanya simba;
bepa fekitori zvakashata zvinhu kusvina muchina
Hapana yekucheka system kusvina muchina
firimu inosvina muchina
Pe / PP firimu inosvina muchina
300kg / h firimu inosvina muchina